गर्भवती महिलालाई मेहन्दी खतरा !
ज्याेति तिलाञ्जली काठमाडाैं, ५ साउन
बानेश्वरकी रितु सुवेदी हातभरि हरियो चुरा र मेहन्दीमा सजिएकी छन् । साउनमा मेहन्दी नलगाउँदा उनलाई चित्तै बुझ्दैन । रितु भन्छिन्, ‘शिवजीलाई खुसी बनाउन साउनमा हरियो चुरा, हरियो वस्त्र र मेहन्दी लगाउँछु । नलगाए शिवजी रिसाउने पो हुन् कि भन्ने लाग्छ ।’
रितुको हातमा मेहन्दीले श्रीमानको नाम लेखिएको थियो । रितु भन्छिन्, ‘मेहन्दी पारिवारिक प्रेमसँग जोडिएको छ । साउनमा लगाइने मेहन्दी पतिप्रति समर्पित छ त्यसैले हरेक वर्ष पतिको नाममा मेहन्दी लगाउँछु ।’
साउनमा विवाहित तथा अविवाहित महिलाको हात हरियो चुरा र मेहन्दीले सजिएको हुन्छ । बालिकादेखि वृद्धासम्मले मेहन्दी लगाउँछन् । कोही महिला धार्मिक विश्वासका आधारमा मेहन्दी लगाउँछन् भने कोही फेसनका रुपमा मेहन्दी लगाउँछन् ।
असारे चटारो सकिएपछि वा हिलोको काम सकिएपछि महिलाले हातमा मेहन्दी लगाउने परम्परा छ । खेतमा काम गर्दा र रोपाइँ गर्दा हातखुट्टामा लागेको चोट हटाउन र त्यसलाई मुलायम बनाउन पनि मेहन्दी लगाउने चलन रहेको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन् ।
बजारीया मेहन्दीको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा घरमै तयार पारिएको प्राकृतिक मेहन्दी राम्रो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तिउरीमा गाउँघरमै पाइने चिजहरू मिसाएर मेहन्दी बनाइन्थ्यो तर अहिले बजारमा ‘तयारी मेहन्दी’ पाइन्छ ।
बालाजुकी सपना थापा पनि साउनभरि हरियो वस्त्र लगाउँछिन् । तर, मेहन्दी लगाउँदा हातमा एलर्जी हुने भएकोले आफूले नलगाए पनि मेहन्दी मन पर्ने उनको भनाइ छ ।
हरियो पहिरनसँग भगवान् शिवप्रतिको विश्वास र आस्था जोडिएको प्रस्ट देखिन्छ । विवाहित महिलाका लागि मेहेन्दी, हरियो चुरा र पहिरन सौभाग्यको प्रतीक हो भने अविवाहित महिला यसलाई उत्सुकता जगाउने रमाइलो माध्यमका रूपमा लिन्छन् ।
साउन र हरियोको सम्बन्ध
कलेज पढ्ने युवतीदेखि चालिस कटेका महिलाका लागि पनि अहिले हरियो पहिरन रोजाइमा पर्छ । साउनमा हरियो रङ धेरै प्रसंग र विश्वाससँग जोडिएकाले पनि लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता एकातर्फ छ भने समयअनुसारको बदलिँदो फेसनशैलीले झनै आकर्षण बढाएको देखिन्छ । संस्कृतिविद् तुलसीदिवसका अनुसार प्रकृतिमा घुलेको यो हरियो रङले मनलाई खुसी बनाउने सामथ्र्य राख्छ । साउनमा देखिने हरियो मौसम प्रकृतिसँग मनको मेल पनि हो । जसले मनमा प्रेम र खुसी दिन्छ ।
रातो, हरियो, नीलो र पहेंलो रङमा आशा, अपेक्षा, माया, विश्वास र प्रेमको भाव अडिएको छ । यीमध्ये साउनमा हरियोको महत्त्व विशेष छ । हरियो शान्तको प्रतीक हो ।
‘हरियो सकारात्मक र आनन्दको ऊर्जा सञ्चार गर्ने रङ हो,’ संस्कृतिविद् तुलसीदिवसले भने ।
धर्मग्रन्थमा हरियो रङ
हिन्दू धर्मग्रन्थअनुसार साउनमा माता पार्वतीले पति महादेवलाई खुसी बनाई सौभाग्य प्राप्त गर्न हरिया चुरा, पोते र हातमा मेहन्दी लगाएकी थिइन् । र, उनले महादेवबाट खुसी प्राप्त गरेको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ ।
मेहन्दीले स्वास्थ्यमा खतरा
श्रीमानको आयु बढ्ने विश्वासमा साउनमा मेहन्दी, हरियो चुरा र वस्त्र लगाएको बताउँछिन्, काठमाडौंकै शिला बस्नेत ।
देखासिकीकै आधारमा मेहन्दी लगाउनेहरू पनि धेरै छन् । पछिल्लो समय मेहन्दीले फेसनको रुप धारण गरेको छ । कुहिनादेखि औंलाको टुप्पासम्म मेहन्दी लगाउने चलन छ । विशेषगरी, हिन्दु नारीले सुन्दरता र सौभाग्यका लागि साउनभरि मेहन्दी लगाउँछन् । तैपनि, बजारमा पाइने मेहन्दीले स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । बजारीया मेहन्दी लगाउँदा सचेत बन्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यस्तो मेहन्दीमा रसायन हुने भएकाले छालामा विभिन्न समस्या देखिने चिकित्सकको भनाइ छ ।
छाला रोग विशेषज्ञ डा. स्मृति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मेहन्दीलाई गाढा बनाउने नाउँमा यसमा विभिन्न केमिकल प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसले मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्छ । बजारमा पाइने जस्तोसुकै मेहन्दीका कारण छाला पोल्ने, छालाको एलर्जी, फोका उठ्ने, डाबर उठ्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् त्यसैले सस्तो मूल्यमा पाइयो भन्दैमा जस्तोेसुकै मेहन्दी लगाउनुहुँदैन ।’
प्राकृतिक मेहन्दी प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ । हरियो हिना मेहन्दीको प्रयोग सामान्यतया ठीकै मानिए पनि रातो वा कालो हिनाको प्रयोग छालाका लागि अनुपयुक्त हुने डा. श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
श्रेष्ठका अनुसार हिनालाई कालो वा रातो बनाउन प्रयोग गरिने केमिकलले हातमा छिटो मेहन्दी लागे पनि यसले छालामा विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ । साथै छालामा कुनै पनि प्रकारको एलर्जी भएका मानिसले त्यस्तो मेहन्दीको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
त्यस्तै, कपालमा प्रयोग गरिने हिनाले पनि छालामा समस्या निम्त्याउने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । हरियो रङको हिनाले सामान्यतया छालामा कम असर गरे पनि लामो समयसम्म कालो वा रातो रङको मेहन्दी प्रयोग गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिएको केमिकलले निधार वा अनुहार कालो हुने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
गर्भवती महिलालाई मेहन्दी हानिकारक
गर्भवती महिलाले मेहन्दी प्रयोग गर्नु त्यति उत्तम नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मेहन्दीमा प्रयोग भएका केमिकलले गर्भको बच्चालाई असर गर्ने र गर्भ तुहिन सक्ने भएकाले सकेसम्म गर्भवतीले कपाल वा हातमा मेहन्दी नलगाउँदा उत्तम हुने डा. श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
नेपालमा मेहन्दी व्यापारका लागि कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । त्यस्तै, यसको अनुगमन पनि गरिँदैन । यसकारण, बजारमा जथाभावी रुपमा मेहन्दी बिक्री भइरहेको छ । अनुगमन नहुँदा महिलाहरू बजारमा उपलब्ध स्वास्थ्यप्रतिकूलका मेहन्दी लगाउन बाध्यसमेत छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ६, २०७६, ०६:१३:००